Iibso Powder DHEA Si Aad U Hagaajiso Jidhka Jidhka & Hagaajinta - Dheef -shiidirka Caafimaadka & Waxqabadka Difaaca - Maraakiibta Bilaashka ah & Canshuur La'aan | WoopShop®
NET-KA: 5g-100 g
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: Dehydroepiandrosterone
Nambarka Tusaale: B151
DHEA Hordhac Weyn:
Dehydroepiandrosterone (DHEA) waa isteroydhis badan oo ku lug leh saamayn bayooloji ah oo aad u ballaadhan oo ku jirta bini -aadamka iyo naasleyda kale. Iyada oo ay weheliso aashitadeeda sulfate (DHEAS), waa steroid -ka ugu badan ee aadanaha.
DHEA waxaa soo saara qanjidhada adrenal laakiin sidoo kale waxay ku dhex abuurtay de novo maskaxda. Waxay si toos ah iyo dheef -shiid kiimikaadkeeda u dhaqdaa, oo ay ku jiraan androstenediol iyo androstenedione, kaas oo mari kara beddelid dheeri ah si loo soo saaro testosterone androgen iyo estrogens estrone iyo estradiol.
Daraasaduhu waxay muujiyeen in DHEA ay waxtar u leedahay bukaanka qaba lupus erythematosus nidaamsan. Codsiga cadaymaha waxaa ka hadlay Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Maraykanka 2001 waxaana laga heli karaa internetka.
Dib -u -eegiddu waxay kaloo muujineysaa in kolestaroolka iyo dufannada kale ee dhiigga ay hoos u dhacaan isticmaalka DHEA (badiyaa hoos u dhaca HDLC iyo triglycerides ayaa laga filan karaa dumarka, p110).
DHEA Function Main:
DHEA waxay leedahay hawsha ka-hortagga gabowga, ilaaliso xoogga dhallinyarada.
DHEA waxay wanaajisay jirdhiska jirka, wanaajisay niyadda iyo hurdada, waxay hagaajisay saamaynta xusuusta.
DHEA waxay hagaajin kartaa shaqada galmada, waxay kordhin kartaa libido.
DHEA waxay habeyn kartaa nidaamka difaaca, hagaajin kartaa difaaca jirka.
DHEA waxay leedahay door labaad xagga daaweynta cudurrada.
DHEA waxay hagaajisaa niyadda iyo hurdada
Gaarsiinta Kanada waxay ahayd mid degdeg ah. Shaygu wuxuu ku milmi karaa ethanol ama khamriga isopropyl (loogu talagalay transdermal), ama saliid diiran leh ama aan lahayn fitamiin E. Wax badan ha qaadan ama waxay u leexan doontaa estrogen. Adeegsiga paypal ayaa ku habboon markaa waxaan ku faraxsanahay aliexpress inay tan bixiso.
Badeecad aad u fiican iyo adeeg